Dhibeen Vaayirasii Koronaa Ji’a sadi dura Chaayinaa keessatti ka’e yeroo ammaa biyyoota Addunya 212 keessatti tamsa’uun, ummata miiliyoona 3,375,920 hubuu gabaafame. - NuuralHudaa
Dhibeen Vaayirasii Koronaa Ji’a sadi dura Chaayinaa keessatti ka’e yeroo ammaa biyyoota Addunya 212 keessatti tamsa’uun, ummata miiliyoona 3,375,920 hubuu gabaafame.
Dhibeen Vaayirasii Koronaa Ji’a sadi dura Chaayinaa keessatti ka’e yeroo ammaa biyyoota Addunya 212 keessatti tamsa’uun, ummata miiliyoona 3,375,920 hubuu gabaafame. Sababa Vaayirasii kanaatiin hanga guyyaa har’aatti namoonni 238,163 kan du’an yoo tahu, 1,071,989 ammoo dhibee kana irraa fayyanii jiru.
Weerarri Vayirasichaa biyyoota addunyaa hunda caalaa Ameerikaa keessatti kan hammaate yoo tahu, hanga ammaatti lammileen biyyattii 65,029 ol sababa Vaayirasii kanaa lubbuu dhabanii jiru. Ameerikaan ka’umsa Vaayirasii koroonaa ilaalchisee mootummaa Chaayinaa yakkaa jirti. Prezdaant Traamp Vaayirasichi wiirtuu qorannoo Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessaa bahuu raga gahaa qabna jechaa jira. Chaayinaan gama isiitiin bulchiinsi Traamp Weerara Vaayirasichaa too’achuu dadhabnaan Chaayinaa yakkutti jira malee, Vayirasichi labraatorii keessaa kan bahee miti jetti.
Dhimma ka’umsa Vaayirasii koroonaa irratti yaada WHO’n har’a kenne dabalatee odeeyfannoon ijoon COVID-19 wal qabatan kan May 1, 2020 kanneen armaan gadiiti.
18:45GMT-WHO’n Ka’umsi Vaayirasii koroonaa “uumama” tahuu beeksise. Dhaabbatichi akka jedhutti, yaadni Saayintistoota heddu irraa argame “Vaayirasichi bineensota irraa gara namaatti kan dabre” kan jedhu. WHO’n ammas ka’umsa Vaayirasichaa gadi fageenyaan qorachuuf affeerraan mootummaa Chaayinaa irraa yoo dhihaateef ogeeyyota garisitti erguuf qophii tahuu beeksise.
17:30GMT-Xaaliyaan sa’aa 24 dabre keessa lakkoofsi namoota du’anii kan kaleessaa irra hir’atus, lakkoofsi namoota haarayatti Vayirasichi irratti argame garuu kan Khamisa kaleessaa caalaa dabaluu beeksiste. Walumaa galatti hanga har’aatti biyyattii keessatti namoota 207,428 vayirasichaan qabamuu mirkanaahe jidduu, 28,236 du’uu gabaafame.
16:45GMT-Ministeerri Fayyaa Turkiyaa biyyatti keessatti namoota 122,392 vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahe jidduu 3,258 du’uu beeksise.
Turkiyaan U.S.A. fi biyyoota Lixa Awrooppaatti aanuun biyya namoonni heddu keessatti vaayirasichaan qabaman taatee jirti.
16:40GMT-Briteen Khamisa kaleessaa qofa guyyaa tokkotti namoota 122,347 qorachuu beeksiste. Mootummaan biyyatti kanaan dura hanga dhuma ji’a April qorannoo guyyatti raawwatu 100,000 gahuuf karoorfate hojjataa kan ture tahus, paartiileen mormitootaa hanga kaleessaatti mootummaan karooricha hin milkeessu jechuun komataa turan. Biyyattii keessatti hanga har’aatti namoota 177,454 vayirasichaan qabamuu mirkanaahe jidduu 27,510 du’anii jiru.
14:20GMT-Briteen keessatti warri gurraachi hidda dhalataa Afrikaa qaban warra Adii caalatti hedduminaan dhibee COVID-19 du’aa jiraatuu gabaafame. Haaluma walfakkaatuun Ameerikaa keessattis dhibbeentaan Warri Gurraachi Vayirasii kanaan du’an kanneen warra Adii kan caalu tahuu gaabaafamee ture.
07:55GMT-Afayaa’iin Paarlaamaa Paakistaan Asaad Qeeysir Vayirasii koroonaatiin qabamuu beeksise. Mr. Asaad torbee dabre Muummicha ministeeraa Imraan Khan dabalatee qondaaltota mootummaa kanneen biroo heddu waliin sagantaa Ifxaaraa tokko irra akka tures gabaafame.
07:45GMT-Raashiyaa keessatti guyyaa tokkotti nama 7,933 irratti vayirasiin koraanaa argamuu gabaafame. Biiyyattii keessatti hanga ammaatti namoota 114,431 vayirasichi irratti argamuu mirkanaahe jidduu 1,169 du’uu ibsame.
July 31, 2021 sa;aa 5:30 pm Update tahe